Kuuriyada Woqooyi: Xayiraad uma dhutinayno - BBC News Somali
Waa la cusbooneysiiyay 19 Sebtembar 2017
North Korea ayaa Japan dulmarisay gantaal
Dalka Kuuriyada Woqooyi ayaa ku hanjabay in cunna qabateyn kale iyo cadaadis dheeraad ah ay ka helayaan awood ay ku sii hormariyaan barnaamijka nukliyerka.
War qoraal oo aad u adkaa ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Woqooyi kaga hadlay xannibaad cusub oo ay Qaramada Midoobey saartay.
Wuxuu tallaabadaas ku tilmaamay "arrinta ugu xun oo anshaxdaro ah, xadgudubna ku ah aadanaha oo ah ficil cadowtinimo".
Dhanka kale, Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa gacanka Kuuriya ka fuliyay dhoolatus militari.
Kuuriyada Woqooyi wa arrinta ugu weyn ee isbuucan looga hadlayo shirka Qaramada Midoobey.
Trump: Fudaydka Kuuriyada Woqooyi waa in laga falceliyaa
Golaha Ammaanka oo cunoqabatayn cusub ku soo rogay Kuuriyada Woqooyi
Maamulka Pyongyang ayaa riday gantaalkii ugu dambeeyay Jimcihii wuxuuna dulmaray Japan. Gantaalkaas waxaa lagu tilmaamay tijaabadii ugu dheereyd ee Kuuriyada Woqooyi ay sameyso.
Tijaabadaas ka dib Qaramada Midoobey ayaa cunna qabayn dheeraad ah saartay Pyongyang, waxaana loo cambaareeyay si loo dhan yahay. Waxaa lagu tilmaamay "daandaansi".
Warka qoraalka ah ee ka soo baxay xafiiska wasaaradda arimaha dibadda ee Kuuriyada Woqooyi waxaa lagu sheegay: "Sare u kaca dhaqdhaqaaqa Mareykanka ee gobolka iyo cunna qabataynta iyo cadaadiska naga dhanka ah wuxuu xoojinayaa xawaaraha uu ku socdo qorsheheena ah in ugu dambeyn aan helno nukliyer."
Warka ayaa waxa sidoo kale lagu sheegay in cunaqabataynta cusub ay qayb ka tahay in jilbaha dhulka loo dhigo xukuumadda dalkaas.
Diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed
Cunaqabataynada cusub ee Qaramada Midoobay ayaa waxaa sidoo kale looga gol leeyahay in shidaalka looga xayiro Kuuriyada Waqooyi, sidoo kalana ciriiri looga galiyo dakhliga ay ka hesho barnaamijkeeda hubka.
Talaabooyinka ayaa waxa ay ka dambeeyeen kadib tijaabii lixaad, uguna xoogga badnayd oo ay samaysay Kuuriyada Waqooyi . Hase yeeshee dadka wax naqdiya ayaa su'aalo ka keenay illaa heerka ay xanuunjin karaan Kuuriyada Waqooyi xili dalkan uu si furfuran ula ganacsanayo adduunka intiisa kale.
Sanadkii hore oo kaliya dalkan waxa uu dhaqaalihiisa kordhay 3.9%, taasina waxaa ugu wacan xiriirka ganacsi ee kala dhaxeeya Shiinaha.
Khudbadda uu madaxweynaha Maraykanka Donald Trump u jeedin doono golaha loo dhanyahay ee Qaramada Midoobay ayaa la filayaa in ay xagga hore kaga jirto arrinta barnaamijka hubka ee Kuuriyada Waqooyi.
Trump iyo Abe oo u heshiiyay Kuuriyada Woqooyi
Qaramada Midoobay oo cuno qabatayn cusub ku soo rogtay Kuuriyada Woqooyi
Xiisadda Kuuriya: Madaxweynaha Shiinaha oo ku baaqay xasilooni
Kuuriya Woqooyi: 'Gantaalka Japan waa hordhaca howlgalka Pacific-ga'
Ciidamada Mareykanka 'ma aysan aadin' Kuuriyada Woqooyi